Ikhefu lokuzithandela: liyini, ngubani ongalicela nokuthi kanjani | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 26/07/2021 09:07 | Umsebenzi
Lapho ubusebenza isikhathi eside emsebenzini ofanayo, kwesinye isikhathi ukugqashuka kukwenza ungasebenzi kahle kakhulu. Yize kunamaholide okuzolulama futhi avuseleleke, kunesinye isibalo abangasazi abaningi, kepha lokho kungathakazelisa ukusibheka. Sikhuluma ngekhefu lokuzithandela.
Kodwa, Yini ikhefu lokuzithandela lokungabikho? Imaphi amalungelo onawo? Ngubani ongayisebenzisa? U-oda kanjani? Uma ufuna ukwazi kabanzi ngalesi sibalo okuchazwe kuso iSitatimende Sabasebenzi, nakwiminye imithetho, lapha sikutshela kabanzi ngaso.
1 Yini ikhefu lokuzithandela
2 Ubani ongacela ikhefu lokuzithandela
3 Ungasicela kanjani isikhathi sokungabikho emsebenzini ngokuzithandela
5 Ungacela kanjani ukungena kabusha enkampanini
Yini ikhefu lokuzithandela
Ukuchaza ikhefu lokuzithandela, kufanele siqale siye ku-athikili 46 yeSitatimende Sabasebenzi, noma i-ET, lapho okushiwo okulandelayo:
"1. Ikhefu lokungabikho lingaba lokuzithandela noma lokuphoqelelwa. Okuphoqelekile, okuzonikeza ilungelo lokugcinwa kwesikhundla kanye nokubalwa kobude bokuba semthethweni kwaso, kuzonikezwa ngokuqokwa noma ngokhetho esikhundleni somphakathi esenza kube nzima ukuya emsebenzini. Ukufakwa kabusha kufanele kucelwe kungakapheli inyanga elandela ukumiswa kwehhovisi lomphakathi.
2. Isisebenzi esinonyaka okungenani owodwa wobudala enkampanini sinelungelo lokuqashelwa ukuthi kungenzeka yini sithathe ikhefu lokuzithandela lokungabikho isikhathi esingekho ngaphansi kwezinyanga ezine futhi singabi ngaphezu kweminyaka emihlanu. Leli lungelo lingasetshenziswa futhi yisisebenzi esifanayo uma kuphela iminyaka emine selokhu kwaphela ikhefu lokuzithandela langaphambilini.
3. Abasebenzi bazoba nelungelo lesikhathi sekhefu esingeqile eminyakeni emithathu ukunakekela ingane ngayinye, kokubili uma kungokwemvelo, njengokutholwa, noma ezimweni zokugcinwa ngezinhloso zokutholwa noma ukunakekelwa unomphela., ukubala kusukela osukwini lokuzalwa noma, lapho kufanele khona, esinqumweni sokwahlulela noma sokuphatha.
Abasebenzi ukuthi banakekele isihlobo kuze kufike ezingeni lesibili lokudla okuhlanganisiwe noma ukusondelana nabo banelungelo lokuthola isikhathi sekhefu, esingahlala isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili, ngaphandle uma isikhathi eside sisungulwa ngokuxoxisana okuhlangene, kunangezizathu zeminyaka yobudala, ingozi, ukugula noma ukukhubazeka akukwazi ukuzimela, futhi akuwenzi umsebenzi okhokhelwayo.
Ikhefu lokungabikho elihlongozwe kulesi sigaba, isikhathi salo esingajatshulelwa ngendlela engatheni, liyilungelo lomuntu ngamunye labasebenzi, labesilisa noma labesifazane. Kodwa-ke, uma abasebenzi ababili noma ngaphezulu benkampani efanayo beveza leli lungelo ngeqembu elifanayo eliyimbangela, umqashi anganciphisa ukusebenza kwakhe ngasikhathi sinye ngezizathu ezizwakalayo zokusebenza kwenkampani.
Lapho isihloko esisha esiyimbangela sinikeza ilungelo lesikhathi esisha sekhefu, ukuqala kwaso kuzophela leso, uma kusebenza, ebesikujabulela.
Isikhathi lapho umsebenzi ahlala khona esekhefini ngokuya ngemibandela yalesi sihloko sizobalwa ngezinhloso zokuba mdala futhi umsebenzi uzoba nelungelo lokuya ezifundweni zokuqeqeshelwa umsebenzi, okumele iqhaza lakhe libizwe ngumqashi, ikakhulukazi ngezikhathi ezithile lokubuyiselwa kwakhe. Ngonyaka wokuqala uzoba nelungelo lokugcina umsebenzi wakho. Ngemuva kwalesi sikhathi, ukubhuka kuzodluliselwa emsebenzini eqenjini elifanayo lobuchwepheshe noma esigabeni esifanayo.
Kodwa-ke, lapho umuntu osebenzayo eyingxenye yomndeni owaziwa njengomndeni omkhulu, ukubekiswa komsebenzi wabo kuzokwandiswa kuze kufike ezinyangeni eziyishumi nanhlanu uma kwenzeka umndeni omkhulu wesigaba esijwayelekile, futhi ufike kokukodwa okuphezulu wezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili uma kuyisigaba esikhethekile. Lapho umuntu esebenzisa leli lungelo ngobude besikhathi kanye nombuso njengaye omunye umzali, ukubekiswa komsebenzi kuzonwetshwa kufinyelele ezinyangeni eziyishumi nesishiyagalombili.
4. Ngokunjalo, abasebenzi abenza imisebenzi yesifundazwe noma ephakeme yezinyunyana isikhathi sokusebenza kwesikhundla sabo sokumela bangacela ukudlulelwa kwabo esimeni sekhefu lokungabikho enkampanini.
5. Isisebenzi eselivini lokuzithandela sigcina ilungelo elilodwa lokukhetha lokuphinda lingene ezikhundleni zomkhakha ofanayo noma ofanayo nezakhe ezikhona noma ezenzeka enkampanini.
6. Isimo sekhefu singanwetshwa nakwamanye amacala okuvunyelwene ngawo ngokuhlanganyela, nombuso kanye nemiphumela okuyo.
Ngokususelwe kokungenhla, singakwazi chaza ikhefu lokuzithandela njengesimo lapho umsebenzi ecela ukumiswa kwenkontileka yokuqashwa enkampanini yakhe. Ngale ndlela, ngisho nesisebenzi akumele siye emsebenzini. Futhi inkampani akumele imkhokhele umholo wakhe, noma imnikele ngisho nangaye.
Njengoba kungokuzithandela, kusho ukuthi yisisebenzi esikucelayo, nganoma yisiphi isizathu, ngaphandle kokunikeza izincazelo enkampanini. Kuncike ekutheni kutholakale ngokuthembekile.
Vele, lokhu kunemiphumela eminingi okufanele icatshangelwe.
Ubani ongacela ikhefu lokuzithandela
Ukuze ucele ikhefu lokuzithandela kuyadingeka ukuthi uchungechunge lwe izidingo okuyi:
Ukuthi unenkontileka yokuqashwa nenkampani.
Lokho kuneminyaka okungenani yonyaka owodwa.
Akakafaka isicelo selivu yokuzikhethela ngokuzithandela eminyakeni emine edlule.
Uma konke lokhu kwenziwa, ungaqala ukubhala amaphepha. Kumele kubhekwe, njengoba kushiwo ku-ET, ukuthi lokhu kuzoba okungenani izinyanga ezine kanye neminyaka emihlanu.
Empeleni, i-ET isungula izindlela ezahlukahlukene zalolu hlobo lekhefu lokungabikho. Kepha akusho ukuthi kungalezo zimo kuphela lapho kungacelwa khona. Eqinisweni, inga-odwa nganoma yisiphi isizathu ngaphandle kokunikeza izincazelo enkampanini uqobo.
Ungasicela kanjani isikhathi sokungabikho emsebenzini ngokuzithandela
Uma ngemuva kwalokhu okufundile ucabanga ukuthi yilokho okudingeka ukwenze, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukucela ikhefu lokuzithandela lokungabikho.
Kulokhu, Into yokuqala okufanele yenziwe ukubhala incwadi evela esisebenzini lapho etshela khona inkampani ukusetshenziswa kwelungelo lekhefu lokuzithandela lokungabikho. Kule dokhumenti akudingekile ukuthi ucacise izizathu eziholela kulokhu. Kepha kunesikhathi, kokubili ukuqala nokuphela. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi kunesikhathi esincane sezaziso ngaphansi kweSivumelwano Sokuhlanganyela. Futhi uma ingekho, kufanele imenyezelwe enkampanini ngokushesha okukhulu ukuze ikwazi ukuphendula (ngokuvuma noma kabi) kuleso sicelo.
Kulokhu, ungathola ukucabanga okubili:
Inkampani yamukela ilungelo lakho. Kulokhu, lapho usuku olunqume njengesiqalo lufika, ubudlelwano bokuqashwa buyomiswa, obungaphuli. Ngemuva kwesikhathi, inqobo nje uma ingekadluli iminyaka emihlanu, uzokwazi ukuphinda uhlangane futhi noma nini lapho kunezikhala.
Inkampani ayilamukeli ilungelo lakho. Kuzofanele ufake icala lokwephula ilungelo futhi, kuze kube yilapho kukhona isinqumo senkantolo esiqinile, kuzofanele uqhubeke nokusebenza. Kulezi zimo, abasebenzi abaningi bagcina becela ukuxoshwa ngokuzithandela lapho kungenakwenzeka ukubuyisana nenkinga eholele ekhefini lokuzithandela nosuku lokusebenza.
Akunasimo lapho isisebenzi kufanele siyeke ukuya emsebenzini waso, ngoba uma senza kanjalo, inkampani ingamxosha ngenxa yokushiya umsebenzi. Uma inkampani ingaphenduli esicelweni, njengasendabeni yokungamukelwa, kuzodingeka ukumangalela futhi ulinde umphumela walokhu.
Into yokuqala okufanele uyazi ngekhefu lokuzithandela ukuthi, uma uyicela, inkampani ayiphoqelekile ukuthi ikugcinele umsebenzi. Ngamanye amagama, uma ufuna ukubuyela enkampanini akudingeki ukuthi ikunikeze umsebenzi obukade unawo phambilini. Empeleni, lokho ozoba nakho kuphela ilungelo lokukhetha ukungena kabusha. Kusho ukuthini lokhu? Yebo, uma kunesikhala esisesikhundleni sesigaba esifanayo noma esifanayo, bazokunikeza sona.
Manje, lokho akusho ukuthi, ngesiVumelwano esiHlangene, noma ngeminye imithethonqubo elawula ukuphathwa kwenkampani, ezinye izici azikwazi ukusungulwa. Isibonelo, uma kukhona ukubhuka kwesikhundla isikhathi esilinganiselwe, futhi ngemuva kwalokhu kungukungena kabusha okukhethwayo kuphela.
Ungacela kanjani ukungena kabusha enkampanini
Kuncike ekutheni iminyaka emihlanu ayikapheli selokhu kwavunyelwa ikhefu, isisebenzi singacela inkampani, ngokubhala, ukuthi icele ukuphinde ingene emsebenzini.
La Inkampani kufanele ifunde lesi sicelo, ifunde izikhala ezikhona futhi ziphendule leso sicelo. Lokhu kunconywa ukuthi kwenziwe ngokushesha okukhulu, ikakhulukazi njengoba ukusondela ekupheleni kwekhefu lokuzithandela kuzoba kubi kakhulu.
Ngokuqondene nempendulo yenkampani, ungazithola unezinketho eziningi:
Lokho akuphenduli: Kuzofanele umangalele ilungelo lakho lokungena kabusha (elingahanjelwa), kanye nokuxoshwa. Ngezinjongo zomthetho, iqiniso lokuthi inkampani ayiphenduli esikhathini esithile kulingana nokuxoshwa, futhi kungadingeka ukubika.
Yamukela isicelo: Inkampani izonikeza umsebenzi umsebenzi wesigaba esifanayo noma esifanayo futhi isisebenzi singamukela noma cha. Uma wamukela, ungabuyela emsebenzini; uma kungenjalo, khona-ke kunjengokungathi uvalelisile (ngaphandle kokuthi lokho akuphiwe bekungekhona kwesigaba esifanayo noma esifanayo).
Ayisamukeli isicelo kepha ayikuphiki ukungena kabusha: Lokhu kuvame ukwenzeka lapho izinkampani zingenazo izikhala ngalezo zikhathi. Futhi, ngakho-ke, isisebenzi asikwazi ukujoyina kabusha. Kufanele ulinde isikhashana ukuze uphinde ufake isicelo sokungena kabusha.
Ungasamukeli isicelo futhi awufuni ukungena kabusha: Kuyafaneleka ukuxoshwa, ngakho-ke inkampani ingamangalelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Ilivu yokuzithandela